Kukosha kwekufefetedza imba yako zvakanaka | Bezzia
Pau Heidemeyer | 01/05/2021 16:00 | Yakagadziridzwa ku 28/04/2021 16:47 | Musha
Iva kufefetedza kwakanaka pamba chinhu chikuru pakuva imba ine hutano. Iwe unowanzo fefetera kazhinji? Izvo zvakakosha kuti iwe uzviite nguva dzose, kuti uderedze zvinosvibisa zvinhu.
Kusawana kufefetedza kwakanaka mudzimba kunokwanisa kugadzira kuwedzera kwebhakitiriya, kuwedzera kwakanyanya kwezvinhu zvinokuvadza kuhutano, senge hunyoro tudonhwe, mabhakitiriya anogona kubva kubvudzi remhuka, carbon monoxide, kana carbon dioxide.
Kana imba isina mweya wakakwana, izvi zvinogona kukanganisa hutano hwevanhu. Pakati pezvimwe zviratidzo, kutemwa nemusoro, matambudziko ekufema kana matambudziko ekurara anowedzerwa, iyi mimwe yemienzaniso yemhedzisiro yekusaburitsa mweya mumba.
Mumba mune kufefetedza zvakakwana, hazvisi nyore kuomesa humidity yeimba, kubviswa kwehutachiona, guruva, Kunhuwirira kwakashata kuchabviswa uye nekuda kweiyo nyowani oksijeni kupfura, iwe unozogona kuwedzera kutenderera kwemhepo.
1 Nenzira iyi iwe uchazoziva kana iwe uine mweya wakaringana mumba mako
2 Aya ndiwo mabhenefiti ekuchengetedza mhepo yakanaka pamba
3 Iyi ndiyo mhedzisiro yekutadza kufefetera kwemhepo mumba
4 Aya ndiwo marongero aunoita emhando yepamusoro mweya mumba
5 Maitiro ekufefetedza imba
5.1 Kufefetedza kwechisikigo
5.2 Kuyambuka kufefetedza
5.3 Kumanikidzwa kufefetedza
5.4 Shandisa mafeni
5.5 Muganho wevanhu mukati meimba
Nenzira iyi iwe uchazoziva kana iwe uine mweya wakaringana mumba mako
Izvo zvakakosha kuita tsika yekuburitsa mumba mazuva ese, dzimwe nguva tinotenda kuti tinoita zvese zvinogoneka kuve nemba yakanaka imba, zvisinei, isu tingave tisiri kuita zvese nemazvo sekufunga kwedu. Kuti uzive kana imba yako iine mweya wakakwana, zvichave zvakakwana kuteedzera nhevedzano yenongedzo.
Imba yako ingangove isina mweya wakaringana, nekuti dzimwe nguva tinokanganwa kushandisa dhizaini yekicheni kana mune dzimwe nguva isu hatina dhizaini muchimbuzi kutibatsira kufefetedza mukamuri. Kana iwe usina fan yekuchenesa yekuchenesa mweya, iwe unofanirwa kuvhura mahwindo kaviri pazuva.
Kune rimwe divi, kana iwe ukafunga kupfungaira mukati memba, zvinogona kuwedzera kuunganidzwa kwe zvine chepfu, izvo zvinoita kuti hutano hwevanogara pamwe huwedzere.
Aya ndiwo mabhenefiti ekuchengetedza mhepo yakanaka pamba
Imba yacho inofanirwa kuve nemhepo yakanyatsonaka kuitira kuti kutenderera kwemhepo kuve kwakanyanya. Kuti izvi zviitike, zvakanakisa kufefetedza mangwanani nemazuva ese. Chii chimwe, edza kuti pane yazvino mumba makoKana iwe uchikwanisa, gadzira zvinyorwa nekuvhura windows mumativi ese ari maviri.
Nekungofefetedza maminetsi gumi pazuva, iwe unowana imba yako kuti iwane mabhenefiti akakura, senge iwo akatsanangurwa pazasi
Kupera mune zvechirwere.
La oxygenation mweya uye kabhoni dhayokisaidhi kubviswa.
mutemo we unyoro.
Iwe uchabvisa ari zvakaipa zvinonhuwira uye kuchaja mweya.
Iwe uchawana zorora zvirinani sezvo imba inozove nemhepo yakawanda uye yakachena.
Iyi ndiyo mhedzisiro yekutadza kufefetera kwemhepo mumba
Mumba, kufefetedza kunofanirwa kugara kuchiongororwa kudzivirira mweya kubva mukufema uye kugara uchigara mukati. Kunyaradzwa uye kugarika kwevakagara zvinoenderana nekuva nemhepo nyowani uye yakavandudzwa mazuva ese.
Utsi hunogadzirwa kana uchibika, kana uchigeza, kana tikashandisa kupisa pamwe chete nemhepo isina mweya, zvinogona kukonzera kushomeka kwemweya weoksijeni, asi hazvirevi kukuvara kwehutano.
Uku kunyaradzwa kune avo vanogara mumba, vanofanirwa kutsungirira nekuda kweichi chikonzero, kufefetedza kunofanirwa kuitwa nguva dzose uye mazuva ese nguva nenguva. Kusina imba ine mweya wakanaka wakakwana, inosanganiswa nekushushikana uye mamwe mamiriro ekufema.
Aya ndiwo marongero aunoita emhando yepamusoro mweya mumba
Tinofanirwa kusiyanisa chinhu chakakosha, sezvo munguva dzechando, masystem ekushisa anogona kushandiswa nguva dzose uye vanoomesa nharaunda zvakanyanya.
Izvi zvinogona kubhadhariswa nekushandisa mamwe mahumidifiers. uye inokwezva kumatekinoroji echisikigo epamhepo kufefetedza, ayo atakambotaura kare.
Kuti imba ishande nemhepo inokwana kufefetera zvakare mumwedzi yezhizha, zvinokurudzirwa kudzora kushandiswa kwemidziyo yemagetsi, unodzivisa mwenje iyo inounza kupisa kwakawanda, shongedza nefenicha yakasimba yehuni uye isa zvirimwa zvinobvumidza kupatsanura kupisa.
Maitiro ekufefetedza imba
Tevere isu tinokupa iwe mamwe makiyi kuti iwe ugone kufefetedza imba yako nemaitiro matatu akasiyana aunogona kuisa mukuita nhasi.
Izvo zvinodikanwa kuti uvandudze mweya nekuvhura windows kune dzivisa kudzikiswa kwemhepo mumba. Izvo zvinoitwa nekuvhura windows chete.
Vhenekera makamuri zvakare zvakakosha kubvisa hunyoro inogadzirwa husiku nekufema, unogona kufefetedza ingangodaro maminetsi makumi matatu.
Iyi ndiyo tsika yakanakisa yekufefetedza dzimba, zvaunofanira kuita kuvhura mahwindo maviri munzvimbo mbiri dzakatarisana yeimba kuitira kuti yemukati mhepo yazvino inogadzirwa iyo inomutsiridza okisijeni nekukurumidza uye nemazvo.
Rudzi urwu rwe kufefetedza zvakasiyana nekuti:
Inoitwa nekutenda ku michina zvinhu.
Iwe unogona kuita iyo chimney mhedzisiro kuitira kuti mweya unopisa uende kumusoro uye mweya unotonhorera udzike.
Shandisa mahwindo asina mhepoIzvi zvinofanirwa kubvumidza kushomeka kwekutsinhana kwemhepo kuve nechokwadi chehutano uye mhando yemukati memhepo.
Imwe nzira yekufefetedza imba yako ndeyevateveri, izvo zvinotibatsira kutenderera mweya nenzira iri nani. Kuti uwane kufefetera kwakanyanya, unogona kuita nhanho idzi
Isa fan iri padhuze newindo rakavhurika sezvinobvira, ichinongedzera kutafasitera. Izvi zvinobvumira izvo zvinogara mukati meimba kuti zvibude zvinobudirira.
Usanongedzera mafeni kune vamwe vanhu, nekuti izvo zvinogona kukonzera mweya wakasviba kuti uende wakanangana navo.
Pakupedzisira, tinokurudzira shandisa siringi mafeni izvo zvinobatsira iwe kunatsiridza kutenderera kwemhepo mumba, zvisinei nekuti mahwindo akavhurika here kana kwete.
Muganho wevanhu mukati meimba
Imwe nzira yekufefetedza imba yako, kana kuona kuti haina kuwedzeredza zvakawandisa zvezvinhu zvisingadiwe nemabhakitiriya, ndeyekudzora huwandu hwevanhu vari munzvimbo imwechete uye kwenguva yakati mumba mako. Naizvozvo, tinokurudzira kuti iwe uteedzere aya marongero:
Deredza huwandu hwevanhu vanoshanyira imba yako.
Ungana munzvimbo dzakakura uye dzakapamhamha, kuti ugone kuramba uchienda kure kure sezvinobvira.
Ita shuwa kuti kushanya kwacho kupfupi sezvinobvira.
Mushure mekushanya, usakanganwa kufefetedza.
Zvese izvi zvichabatsira mhando yemhepo mumba mako kuti igare yakatsiga uye pamusoro pezvose, iine hutano. Usakanganwa kufefetedza imba yako mangwanani kanenge hafu yeawa kuti ugone kufema mweya mutsva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » Kukosha kwekufefetedza imba zvakanaka
Iyo chaiyo yekugadzirira kugadzirira kutamba padhaya tenesi